Prapta: Konke Okusempilweni Kulapha | Martech Zone
I-Prapta: Yonke into Ekuphileni ilapha
NgoMgqibelo, Ephreli 21, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Iposi lami lokuqala elixhasiwe lingelokuthi I-Prapta, iwebhusayithi yokuxhumana nabantu ebhala ukuthi “Everything In Life is Here!” Bangaba futhi ngabokuqala ukwazi ukuthi "Yonke into eku-Social Networking nakuWeb 2.0 ilapha!" Laba bantu bebelokhu besebenza kanzima impela!
Ngokombono wobuchwepheshe, ubuchwepheshe obungemuva I-Prapta akukho okungafani nokungajwayelekile. Isayithi liyi-100% ye-Ajax. Amaforamu, ama-Blogs kanye neminye imisebenzi igxile kuma-Life Experience kwinethiwekhi. Kuhle ukuthatha ukuxhumana nabantu… kunami, mina, mina noma wena, wena, wena, I-Prapta kugxile "thina". Baqoqa lonke ulwazi kuhlelo lokusebenza oluzungezile okuhlangenwe nakho.
Ngikholwa ukuthi iqembu eliqondiwe leminyaka I-Prapta mhlawumbe abantu abadala abasebasha (sengimdala kakhulu ukuthi ngingathokozela okwenzekile njengengxoxo ye-Absinthe engezansi! :).
Kukhona futhi injini yokusesha eqinile engancintisana iyiphi inthanethi ukuphola service. Cabanga ukuphola online uma bekune-blogs, izingxoxo, okwenzeka empilweni, ukuthumela imiyalezo ngokushesha, amawijethi nengxoxo eku-inthanethi (ingxoxo iyeza maduze) futhi une I-Prapta! Uma ngiqhuba insizakalo yokuphola online, ngobuqotho bengizothuthumela emabhuzwini ami kusixazululo esinjengalesi.
Konke okubuyekeziwe akukwazi ukuba kuhle, noma kunjalo, akunjalo? Yize uhlelo lokusebenza luqhutshwa ngokungenaphutha (lwenze ngempela - bengingenankinga nhlobo), ngicabanga ukuthi kunethuba elikhulu lokuthuthuka kubuhle besicelo. I-IMHO, I-Web 2.0 ayigcini nje ngokuhlangana kwe-Ajax, ibuye ibe lula nokusebenziseka kalula.
Ilogo ye I-Prapta kuyinkimbinkimbi futhi kuyingqayizivele. I-logo nayo ime mpo ngenkathi i-interface ikakhulu ivundlile ngakho-ke ibonakala ingekho endaweni. Yonke into esikrinini i-mono-tone, akukho ubukhulu, ama-gradients, noma ukufiphaza. Ngibona ingxenye yalokhu kungenxa yekhono lokwenza ngendlela oyifisayo ikhasi kepha lishiya uhlelo lokusebenza lucabalele (i-pun ehlosiwe).
Ngingaluleka isibonisi esinamandla sokwenza izinto kunokuba izinketho zamanje zokwenza ngokwezifiso… vumela abantu ukuthi bashintshe konke ngokunamandla kunokuba bamane babe yifonti, usayizi wefonti nemibala yamakhasi. I-Web 2.0 imayelana nokuziveza - yilokhu okwenza amanye amanethiwekhi omphakathi athandwe kakhulu. Futhi, okunye ukufakwa kwengxenye kugcwele hhayi isiphequluli esinqamulelayo. Isibonelo ukwenza ngokwezifiso ifonti nombala akunikezeli kahle kimi:
Lokho kusho ukuthi, kuzofanele nginikele I-Prapta amamaki aphakeme kakhulu ngokunikezwa amandla wohlelo hhayi ama-aesthetics. Lokhu kungumsebenzi omuhle futhi onjiniyela bafanelwe udumo olukhulu! Ukutshalwa kwezimali kumculi ocacile ohlangabezane nezinhlelo zokusebenza zewebhu kungashayela lolu hlelo lokusebenza kokudumile nokuthandwayo. Ngicabanga ngobuqotho ukuthi ukuphela kwesizathu ebengingazange ngizwe ngaso I-Prapta ngaphambi!
Ithiphu eyodwa yokugcina: Akunasidingo sokwazisa isixazululo njenge-Ajax noma iWebhu 2.0. Abantu ngeke basebenzise uhlelo lwakho lokusebenza ngalezi zizathu. Thuthukisa isayithi ukuthi liyini - indawo enhle yokwabelana ngolwazi, ukuxoxa ngalo, nokuthola abanye!